China Promotional Cheap 12oz Ecological Nhema Canvas Shopping Bag Mugadziri uye Mutengesi | Zhihongda
Yekusimudzira Yakachipa 12oz Ecological Nhema Canvas Yekutenga Bhegi
1. KUKUNDA KWAKAWANDA: Aya mabhegi anorema-makuru makuru uye anozotakura grocery yakawanda, ichikuchengetera nguva nemari. Yakasarudzika saizi inogamuchirwa
2. KUSVIRA-KUSVIRA: Tambo dzakasonanidzwa kwese kudzika kumberi nekumashure kuti dzigare dzakasimba apo dzakatakura zvinhu zvinorema kana seyakajairwa. Pamusoro pemabhandi epafudzi pakureba zvinoita kuti kutakura zvinhu zvako kuve nyore,
3.Gadzira ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA: Yakakura yekushongedza kana kupenda yako wega dhizaini pairi.
4.MULTI-SHANDISA: Aya mabhegi akakura kune zvekutengesa, kumahombekombe, dziva, pikiniki, kufamba kana kungoita semazuva ese tote.
5.BIODEGRADABLE: Aya mabhegi anokwanisa kuora uye imwe nzira yakanakisa yekurasa masaga epurasitiki.
Item Zita Yekusimudzira Yakachipa 12oz Ecological Nhema Canvas Yekutenga Bhegi
Pashure: Dzokororazve organic kotoni kanivhasi tote yekutenga bhegi ine anodhinda logo promotional mutengesi
Zvadaro: OEM isina chinhu gadzirisa yako logo yekutenga kanivhasi yekotoni tote bhegi
China nokutengesa kanivhasi Tote bhegi kudhinda pamhenderekedzo b ...
Natural isina chinhu logo yakadhindwa eco-hushamwari ...